ဖေဖေါ်ဝါရီဆုတောင်း (Shwe Let Yar Taw) | MoeMaKa Burmese News & Media
ရွှေလက်ယာတော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃
မေးတန်းလန်းနဲ့ အမြဲငေးငေး နေရတဲ့
မြို့လေးကနေ သင်တို့ကို ငါတမ်းတလိုက်မိပါရဲ့……။မိတ်ဆွေတို့……………………………………
အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးကောင်း ပေးရမှာပေါ့။
အမိမြေကိုပေးဆပ်ဖို့ အတွက်… လူငယ်ဆိုတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဘ၀ကို
သည်ကဗျာမှာ ထောက်စရာ ဒူးကိုတပ်မထားဘူး…
မလိုအပ်ပဲနဲ့ ငါးဖယ်တေသလို တေခဲ့ကြတာတွေရော
သူတို့တွေ သီချင်းဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ ….
ပြန်ပြန်လှုပ်ပြီး သူတို့က နိုးထနေကြစေအုံးမယ်။
သည်ကဗျာဟာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ကဗျာ မဟုတ်သလို….
ထောက်စရာဒူး တစ်ချောင်းမှ တပ်ထားတဲ့ကဗျာမဟုတ်ဘူး…။
မေးတန်းလန်းနဲ့ ငေးငေးနေရတဲ့ မြို့လေးကနေ
ဆဲတာက လူသတ်တာလောက်တော့ အောက်တန်းမကျပါဘူး..
ဆဲတာက သမိုင်းကိုသတ်တာလောက်တော့ အောက်တန်းမကျပါဘူး…
ဆဲတာက နိုင်ငံရေးကို သတ်ပစ်တာလောက်တော့ အောက်တန်းမကျပါဘူး…..
ယုဇနပင်တွေကို ဖဲကြိုးဝါတွေစည်းပေးဖို့က နောင်တော်တို့တာဝန်ပါပဲ…
မေးတန်းလန်းနဲ့ အစ်ကိုတွေပြန်အလာကို ငေးငေးနေရတဲ့မြို့လေးဆီက
လူသတ်ဝါဒ ကျဆုံးပါစေ……………။ ။Shwelatyar Daw
ဒီကဗျာကို ရွှေလင်္ကျာတော်၏ FB မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) ကျောင်းသားများ သွေးမြေကျုခြင်း နှစ်လည်အထိမ်းအမှတ် အောက်မေ့ခြင်း၊ အမှတ်တရပြုခြင်းအဖြစ် ကဗျာကို တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် – မိုးမခမီဒီယာ)
(လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် ခဲခြစ်ပုံတူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရာက ဝေယံလို့ ရေးထားပါတယ်။)